CDC waxay soo saartay tilmaamo degdeg ah Pfizer ama Moderna Booster Shots ee Maraykanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » CDC waxay soo saartay tilmaamo degdeg ah Pfizer ama Moderna Booster Shots ee Maraykanka
Caafimaadka Warka • Wararka Mareykanka
Saliingooyinka leh qiyaasaha tallaalka Pfizer COVID-19, ayaa lagu muujiyaa agtooda kaararka tallaalka, Sabtida, Maarso 13, 2021, maalinta ugu horreysa ee hawlgalka ee goobta tallaalka ballaaran ee Xarunta Dhacdooyinka Field Lumen ee Seattle, oo ku xigta goobta kubbadda cagta NFL Seattle Seahawks iyo MLS kubbadda cagta Seattle Sounders waxay ciyaaraan cayaarahooda. Goobta, oo ah goobta ugu weyn ee ay dadka rayidka ahi ka tallaalaan dalka, ayaa shaqayn doonta dhawr maalmood oo keliya toddobaadkii ilaa mas'uuliyiinta magaalada iyo degmadu ay ka heli karaan qiyaaso badan oo tallaalka ah. (Sawirka AP/Ted S. Warren)
Talo-bixinta rasmiga ah ee qofka iyo goorta la helayo tallaalka xoojinta COVID-19 ayaa maanta Xarumaha Xakamaynta iyo Ka-hortagga Cudurrada (CDC) loo sii daayay Ameerika
Talo -soo -jeedin cusub oo sax ah oo CDC ah oo loogu talagalay tallaallada xoojinta Covid ee Mareykanka
Maanta, Agaasimaha CDC Rochelle P. Walensky, MD, MPH, wuxuu oggolaaday talo-bixinta Guddiga La-talinta CDC ee Talaabooyinka Talaalka (ACIP) ee tallaalka xoojinaya tallaallada COVID-19 ee dad gaar ah. The Oggolaanshaha Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA). iyo talooyinka CDC ee isticmaalka ayaa ah tillaabooyin muhiim ah oo hore loo qaaday anagoo ka shaqaynayna inaan ka horrayno fayraska oo aan ilaalino dadka Maraykanka ah.
Shakhsiyaadka qaatay tallaalka Pfizer-BioNTech ama Moderna COVID-19, kooxaha soo socda ayaa u qalma tallaalka xoojiyaha 6 bilood ama ka badan taxanahooda hore:
65 sano iyo wixii ka weyn
Da'da 18+ ee ku nool goobaha daryeelka muddada-dheer
Da'da 18+ ee leh xaaladaha caafimaad ee salka ku haya
Da'da 18+ ee ka shaqeysa ama ku nool goobaha khatarta sare leh
Ku dhawaad ​​15 milyan oo qof oo qaatay tallaalka Johnson & Johnson COVID-19, tallaalada xoojinta ayaa sidoo kale lagula talinayaa kuwa jira 18 iyo ka weyn oo la tallaalay laba ama ka badan bilo kahor.
Hadda waxaa jira talooyin xoojin ah oo loogu talagalay dhammaan saddexda tallaal ee COVID-19 ee laga heli karo Mareykanka. Shakhsiyaadka u qalma ayaa dooran kara tallaalka ay qaadanayaan qiyaas xoojin ah. Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay door bidaan nooca tallaalka ee ay markii hore qaateen iyo kuwa kale, waxay doorbidi karaan inay helaan xoojiye kale. Talooyinka CDC waxay hadda oggol yihiin isku darka noocaan ah iyo qiyaasta isku-dhafka ah ee tallaalada xoojiyaha.
Malaayiin qof ayaa dhawaan u qalma in la siiyo tallaalka xoojinta waxayna ka faa'iidaysan doonaan ilaalin dheeraad ah. Si kastaba ha noqotee, ficilka maanta waa inuusan ka weecin shaqada muhiimka ah ee hubinta in dadka aan la tallaalin ay qaadaan tallaabada ugu horreysa oo ay helaan tallaalka bilowga ah ee COVID-19. In ka badan 65 milyan oo Mareykan ah ayaa weli aan la tallaalin, iyaga oo naftooda - iyo carruurtooda, qoysaskooda, kuwa ay jecel yihiin, iyo bulshooyinka - u nugul.
Xogta la heli karo hadda waxay muujineysaa in dhammaan seddexda Tallaallada COVID-19 ayaa oggolaaday ama oggolaaday Maraykanka sii ahaansho wax ku ool ah ee yaraynta halista cudurrada daran, isbitaal dhigidda, iyo dhimashada, xitaa marka laga soo horjeedo si baahsan Kala duwanaanshaha Delta. Tallaalka ayaa weli ah habka ugu wanaagsan ee lagu badbaadin karo naftaada loona yarayn karo faafidda fayraska wuxuuna kaa caawinayaa ka hortagga noocyada kala duwan ee soo baxaya.
Waxyaabaha soo socda waxaa u sabab ah Dr. Walensky:
“Talooyinkan ayaa tusaale kale u ah ballanqaadkeenna aasaasiga ah ee ah inaan ka ilaalino dad badan intii suurtogal ah COVID-19. Caddayntu waxay muujinaysaa in dhammaan saddexda tallaal ee COVID-19 ee Maraykanka laga oggolaaday ay ammaan yihiin-sida lagu muujiyey in ka badan 400 milyan oo tallaal oo hore loo bixiyey. Iyo, dhamaantood aad bay waxtar ugu leeyihiin yaraynta khatarta cudurrada daran, isbitaal dhigista, iyo dhimashada, xitaa iyada oo lagu dhex jiro kala duwanaanshaha baahsan ee Delta
xoojiyaha Booster Shot Pfizer